1. Kartida wasakhda boodhka Maaraynta boodhka maaskarada waxay kuxirantahay kartidooda xanibaada ee boodhka, gaar ahaan boodhka la jecelyahay ee ka hooseeya 2.5 microns. Sababtoo ah cabirka qashinkan ee boodhka ah ayaa si toos ah u geli kara alveoli, caafimaadka aadanaha ayaa sababay saameynta ugu weyn. Bixiyayaal wasakh leh, oo sameeyay ...Akhri wax dheeraad ah »
Maxay Yihiin Faa'iidooyinka ay leeyihiin Maska kuwa la tuuri karo Suuqa?
Hada wasakhowga hawada ayaa ah mid aad iyo aad u xun, isticmaaleyaal badan ayaa xirto maaskaro, maaskaro la isticmaali karo waa kuwa ugu badan ee ay adeegsadaan dadka isticmaala suuqa. 1. Maqaar jilicsan oo waji-dhaaf ah oo loo isticmaalay in lagu sameeyo walxaha sidoo kale waa mid aad u fiican, marka adeegsiga waji-xidhka waji-samaynta asxaabta ayaa waliba si toos ah u dareemi kara qoraalka sheyga ...Akhri wax dheeraad ah »
1. Xiro maaskaro inta lagu guda jiro xilliga hargabka sare, maalmaha qiiqa iyo boodhka, marka aad xannuunsato ama aad aadid isbitaalka si aad u hesho daweyn caafimaad. Xilliga jiilaalka, dadka da'da ah ee difaaca liito, dadka jiran ayaa sifiican u xirto maaskaro markay baxayaan. 2. Inta badan maaskaro midab leh oo ...Akhri wax dheeraad ah »
Dabaaldegnimada Tartanka Qaranka ee Off-Road F
Maal-galiyaa Tartanka Wadada Wadnaha ee 2019